Ciyaarta Xiisaha badan ee Caawa dhexmari doonta Liverpool & Real Madrid – GOBOLADA.COM
May 28, 2022 May 28, 2022 AbdukadirLeave a Comment on Ciyaarta Xiisaha badan ee Caawa dhexmari doonta Liverpool & Real Madrid
Caawa waxaa dhacaysa ciyaarta aadka loo wada sugayay ee kama danbaysta koobka lagu magacaabo Champions League, waxaana is waajahay laba kooxood oo ah kooxaha ugu tunka weyn yurub.
Real Madrid waxa ay doonaysaa in ay ku guuleysato markeedii 14-aad, taasoo markaas laba jibaar ka badan kooxaha kale, haddii Liverpool ay badiso waxay ka dhigan tahay inay ku guulaystay goobkan toddoba jeer iyada oo la sinmaysa AC Milan (7) oo ku jirto kaalinta labaad ee liiska guud ahaan hanashada koobkan.
Weeraryahanka Liverpool ee Senegal Sadio Mane iyo weeraryahanka Real Madrid ee xulka France Karim Benzema ayaa labaduba u tartamaya inay ku guuleystaan ​​​​Ballon d’Or-ka sanadkan oo la guddoonsiiyo ciyaaryahanka ugu fiican adduunka.
Benzema, oo 34 jir ah, ayaa 15 gool ka dhaliyay Yurub xilli ciyaareedkan – oo ay ku jiraan laba saddexley – waana gooldhaliyaha ugu sarreeya Champions League xilli ciyaareedkii 2021-22, halka Mane uu door weyn ka qaatay guushii ugu horreysay ee waddankiisu ka gaadho Koobka Qaramada Afrika bishii Febraayo.
Mane ayaa sidoo kale ka caawiyay Senegal inay u soo baxdo Koobka Adduunka 2022, iyadoo 30 jirkaan uu labo koob oo maxalli ah kula guuleystay Liverpool xilli ciyaareedkan. Isagoo lala xiriirinayo inuu ka tagayo Reds xagaagan, Mane wuxuu sheegay inuu “jawaab gaar ah” ka bixin doono mustaqbalkiisa ka dib ciyaartan muhiimka ah.
Mohamed Salah ayaa sheegay horaantii bishan Liverpool inay “hawli qabyo kaga tahay” Real ka dib markii ay 3-1 ay kaga badisay kooxdan reer Spain ciyaartii kamadanbaysta koobkan ahayd 2018 ee ka dhacday Kyiv.
Afar sano ka hor, xiddiga Masar ayaa garoonka ka baxay isagoo ilmeynaya ka dib markii uu si xun u dhacay xilli ay is muteen daafacii hore ee kooxdaas Sergio Ramos. “Waxaan doonayaa inaan ka hor imaado iyaga, waxaana rajeynayaa inaan sidoo kale ka guuleysto iyaga,” ayuu hadalkiisa raaciyay Salah, kaasoo aan weli u kordhin qandaraaskiisa oo dhacaya June 2023 kooxdiisa Liverpool.
Waa markii seddexaad ee Liverpool iyo Real ay ku kulmaan ciyaartan kamadanbaysta ah.
Si la mid ah 2018, labada naadi waxay hore kulmeen 1981 markii Liverpool ay 1-0 ku badisay xilli lagu ciyaarayey Paris. Kow iyo afartan sano ka dib, taariikhdu ma soo noqnoqonaysaa? Waa su’aasha hadda taagan.